टि२० विश्वकपमा नभएका पाँच स्टार खेलाडी | Hamro Khelkud
एजेन्सी – टि२० विश्वकप टि२० शैलीको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो । सर्वाधिक मनोरञ्जन क्रिकेटमा टि२० शैलीमा बढी हुने गर्दछ । हरेक खेलाडीको विश्वकप खेल्ने सपना हुन्छ । थोरैको पूरा हुँदा धेरैको अधुरै रहन्छ । केहि खेलाडीको प्रदर्शनको कारण टोलीमा प्रर्दैनन् । कुनै खेलाडी टिम रणनीतिको कारण राम्रो प्रदर्शनका बाबजुद टोली बाहिर हुनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वकपमा स्टार खेलाडीको भेट हुनेगर्दछ । हरेक खेलाडी आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनमा टोलीको जित र उपाधि जिताउन चाहन्छन् । तर विश्वकपमा सबै स्टार खेलाडीले खेल्न पाउछन् भन्ने हुँदैन । आइतबार देखि संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) र ओमानमा टि२० विश्वकप सुरु भएको छ । तर टि२० विश्वकप २०२१ मा थुप्रै स्टार खेलाडीहरु छैनन् । जस मध्यका वर्तमान समयका विश्वकपमा नभएका पाँच स्टार खेलाडी यस प्रकार छन् ।
५. शिखर धवन (भारत)
शिखर धवन वर्तमान समयका रोहित शर्मापछि भारतका सर्वाधिक अनुवभी ओपनर हुन् । तर धवन भारतले विश्वकप टोलीमा पर्न सकेनन् । ६८ टि२० आई खेल खेलेका धवनले ११ अर्धशतक सहित १ हजार ७ सय ५९ रन बनाएका छन् । भारतीय टि२० आईमा विराट कोहली र रोहित शर्मापछि सर्वाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडीमा पर्छन् ।
गतवर्ष आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्सबाट धवनले लगातार दुई शतक प्रहार गरेका थिए । यस सिजनको आइपिएलमा धवन १६ खेलमा ३ अर्धशतक सहित ५ सय ८७ रन बनाउँदै सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचिमा चौथो स्थानमा थिए । धवन कमजोर स्ट्राइकरेट अर्थात सुस्त खेल्ने शैलीको कारण टोलीमा नपरेका हुन् । धवन सुरुवाती समय लिएर खेल्ने गर्दछन् । तर टि२० खेलमा आक्रमक ब्याटरको आवश्यक पर्दछ । भारतसँग रोहित शर्मा, लोकेश राहुल र ईशान किशन जस्ता आक्रामक ओपनर हुँदा उनी बाहिर हुनु परेको हो ।
४.युजभेन्द्र चहल (भारत)
भारतीय क्रिकेट टोलीका सर्वाधिक सफल टि२० बलर युजभेन्द्र चहल विश्वकप टोलीमा छैनन् । भारतले सबैलाई आश्चर्य पार्दै चहललाई टोली बाहिर राखेको छ । टि२० क्रिकेटमा चहल भारतका सर्वाधिक सफल बलर हुन् । चहलले ४९ टि२० आईमा ६३ विकेट लिएका छन् । उत्कृष्ट प्रदर्शन ६–२५ छ ।
चहलले आफ्नो गुगली र लेगस्पिनमा विपक्ष्य टोलीको मध्यक्रम धरासय बनाउँदै आएका थिए । वर्तमान समयका चहल एक उत्कृष्ट लेग स्पिनरमा पर्दछन् । भारतले स्पिनरको रुपमा राहुल चाहर, रविचन्द्रन आश्विन र बरुणचक्रवर्तीलाई राखेका छ । राुहल लेगस्पिनर हुन् । चहलको भन्दा राहुलको बलमा बढी पेश (गति) हुँदा बाहिर राखिएको बुझिएको छ ।
३. फाफ डु प्लेसिस (दक्षिण अफ्रिका)
फाफ डु प्लेसिस दक्षिण अफ्रिकाबाट टि२० आईमा सर्वाधिक रन बनाउने पाँचौं खेलाडी हुन् । फाफ डु प्लेसिसले ५० टि२० आई खेलमा १ शतक र १० अर्धशतक सहित १ हजार ५ सय २८ रन बनाएका छन् । २०१६ को टि२० विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिका कप्तानी डु प्लेसिसलेनै गरेका थिए ।
पछिल्लो समय डु प्लेसिसल उच्च लयमा छन् ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिाएल) चेन्नईलाई जिताउन डु प्लेसिस नायक बनेका थिए । उनले यस सिजनको आइपिएलमा १६ खेलमा ६ अर्धशतक सहित ६ सय ३३ रन बनाउँदै दोस्रो स्थानमा रहेका थिए । अघिल्लो महिना सम्पन्न क्यारेवियन प्रिमियर लिगमा ९ खेलमा १ शतक सहित २ सय ७७ रन बनाएका थिए । राम्रो लयमा भएपनि दक्षिण अफ्रिका क्रिकेट बोर्डसँगको तितो सम्बन्धको कारण उनी टोलीमा नपरेका हुन् । अर्कोतर्फ दक्षिण अफ्रिकाले भविष्यलाई ख्याल गर्दै उनको स्थानमा युवा खेलाडीलाई मौका दिएको पनि हुनसक्छ । उनी उमेरले ३७ वर्ष पुगि सकेका छन् ।
२.जोफ्रा आर्चर (इंग्ल्यान्ड)
वर्तमान समयका तीव्र गतिका बलर जोफ्रा आर्चर चोटका कारण यस पटकको विश्वकप टोलीमा छैनन् । आर्चर बाउन्सरको लागि चर्चित बलर हुन् । उनको बलिङमा गती पनि त्यतिनै छ । सटिक योर्करको क्षमता राख्छन् । २०१९ मा इंग्ल्यान्डलाई एकदिवसिय विश्वकप जिताउन सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका आर्चर २०२१ मा कुनैपनि खेल खेल्ने छैनन् ।
आर्चर दायाँ हातको कुँइनोमा चोटका कारण यो वर्षभरी मैदान बाहिर रहनेछन् । आर्चर नहुँदा इंग्ल्यान्डको डेथ ओभर बलिङ भने कमजोर बनेको छ । आर्चर तल्लोक्रममा ठूला सटको क्षमता राख्ने पनि गर्दछन् । विशेष गरी उनको गती र बाउन्सर विश्वकपमा इंग्ल्यान्डलाई मिस हुने देखिन्छ ।
१. बेन स्टोक्स (इंग्ल्यान्ड)
यस विश्वकपमा नभएका सर्वाधिक ठूला नाम र स्टार खेलाडी इंग्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्स हुन् । स्टोक्स वर्तमान समयका विश्वकै सर्वोत्कृष्ट अलराउन्डर हुन् । स्टोक्स ब्याटिङ र बलिङ दुबैमा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै एक्लै खेल जिताउन सक्ने खेलाडी हुन् ।
इंग्ल्यान्डलाई एदिवसिय विश्वकप उपाधि दिलाउन स्टोक्स सुपर हिरो बनेका थिए । तर स्टोक्सले गत साउनमा मानसिक तनावको कारण अनिश्चित समय सम्मको लागि सबै खाले क्रिकेट शैलीबाट विश्राम लिएका छन् । जसको कारण स्टोक्स इंग्ल्यान्डको टोलीमा छैनन् । सुपर स्टार अलराउन्डर स्टोक्स टोलीमा नहुँदा इंग्ल्यान्डलाई ठूलो घाटा पुग्ने देखिन्छ ।